လည်ပင်းနာကျင်မှုနှင့်အတူနိုး? မင်းရဲ့ခေါင်းကိုမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးလား။ ဘယ်အချိန်မှာစိုးရိမ်ပူပန်ရမလဲ | Santotoro
ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများဟုခေါ်သောအရိုးခုနစ်လုံးကို spongy shock- စုပ်ယူနိုင်သော ‘discs များ’ ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ကျောရိုးသည်နှစ်ဖက်စလုံးမှအရိုးများဖြင့်ကာကွယ်ထားသောတူးမြောင်းကိုဖြတ်သန်းသည်။ ဤအရာများထဲမှမည်သည့်အရာမှမဆိုပျက်စီးခြင်း၊
လည်ပင်းနာကျင်မှုသည်လည်ပင်းတွင်တကယ့်နာကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါကျောင်းသားတစ် ဦး အဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီးနာရီကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပုံရသည် …
နာကျင်မှု – သိသာထင်ရှား! ၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်ပင်းမှ အစပြု၍ ပခုံးတစ်ဖက် (သို့) နှစ်ခုစလုံး (တစ်ခါတစ်ရံလက်မောင်းအောက်သို့ပြန့်ပွားနိုင်သည်) သို့မဟုတ်သင်၏ ဦး ခေါင်းနောက်ကျောသို့ပျံ့နှံ့သည်။ သင်၏လည်ပင်းနှင့်ပခုံးများသည်တင်းကျပ်နိုင်သည်။ တံသင်နှင့်ဆေးထိုးအပ်များမှာများသောအားဖြင့်စိုးရိမ်ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်သော်လည်းသင့်ကျောရိုးမှထွက်သောအာရုံကြောကိုဖမ်းမိနိုင်သည်သို့မဟုတ်စိတ်ဆိုးနိုင်သည်ဟုသူတို့အကြံပြုသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ နာကျင်မှုကိုများသောအားဖြင့်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖြစ်တတ်သည်။
သင့်တွင်အောက်ပါ ‘အနီရောင်အနီများ’ မပါရှိလျှင်သင်သည်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဆရာ ၀ န်နှင့်ပင်တွေ့ဆုံရန်မလိုအပ်ပေ။ ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းနှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းကိုအထူးအခြေအနေများ မှလွဲ၍ ဆေးကုသမှုနည်းလမ်းများကိုမပြောင်းလဲသောကြောင့်မထောက်ခံပါ။
အလံနီ – ဘယ်အချိန်မှာသင်စိုးရိမ်သင့်သလဲ။
လည်ပင်းနာခြင်းအများစုမှာစိုးရိမ်ရန်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ သို့သော်သင်၏လက္ခဏာများကိုအောက်ပါအတိုင်းစစ်ဆေးသင့်သည် –
သငျသညျထိုကဲ့သို့သော whiplash ဒဏ်ရာအဖြစ်မဆိုစိတ်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။
လည်ပင်းအရိုးများ (တစ်ဖက်တစ်ချက်မှကြွက်သားများထက်) သည်အလွန်နူးညံ့သည်။
လည်ပင်းနာကျင်မှုကိုသင်ပထမဆုံးအကြိမ်ခံစားရသောအခါသင်သည်ရွေ့လျားရန်အလွန်နာကျင်ဖွယ်ရှိပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်းကြားနေအနေအထားဖြင့်အနားယူရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်၊ သင့်တွင်အထက်တွင် ‘အနီရောင်အလံများ’ မပါရှိပါက၊ ခိုင်မာသောလည်ပင်းကိုရပ်တန့်ရန်သင်၏လည်ပင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ရှားရန်အရေးကြီးသည် (ထို့ကြောင့်သင့်ဆရာဝန်ကမပြောလျှင်လည်ပင်းကော်လာသို့မဟုတ်သတ္တုအထိမ်းအချုပ်များကိုမထောက်ခံပါ။ ) နာရီအနည်းငယ်တိုင်းလမ်းတိုင်းတွင်သင့် ဦး ခေါင်းကိုညင်သာစွာလှည့်ပါ။ ကြာရှည်ထိုင်ခြင်းမှရှောင်ရှားပါ၊ သို့သော်သင်၏ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုများကိုတတ်နိုင်သမျှဆက်လုပ်ပါ။
ဆေးနှင့် Self- စောင့်ရှောက်မှု
paracetamol ကဲ့သို့သောနာကျင်စေသောဆေးများသို့မဟုတ် ibuprofen ကဲ့သို့သောနာကျင်စေသည့်နာကျင်စေသောဆေးများသည် (သင်၏ဆေးဝါးဆရာဝန်ထံမှဂျယ်လ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်) ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကြွက်သားများချောင်းဆိုးခြင်းများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန်ကကြွက်သားလျှော့ပေးသောအတိုသင်တန်းကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။ နာကျင်ကိုက်ခဲသောကြွက်သားများကိုအပူအအေးသို့မဟုတ်ထုပ်ပိုးခြင်းသည်လည်းကူညီနိုင်သည်။
သင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းမှာ ‘torticollis’ ဖြစ်ပြီးသင်၏ခေါင်းကိုတစ်ဖက်ဖက်သို့လည်ပင်းညှစ်ထားသည့်အခါဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လည်ပင်းကြွက်သားများသို့မဟုတ်လည်ပင်းအရွတ်များကြောင့်ကြွက်သားများကိုချောင်းဆိုးစေသည်။ သောင်ပြင်၌အိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မသက်မသာအနေအထားကိုပေါ်စေနိုင်သည်။ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှကြွက်သားများ၌အလွန်နာကျင်လေ့ရှိသော်လည်းများသောအားဖြင့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း၌ဖြစ်တတ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်နာကျင်စေသောဆေးများကိုကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
လည်ပင်းနာကျင်ခြင်း – ရှောင်ရှားခြင်း
Pilates၊ ယောဂသို့မဟုတ် Alexander အလက်ဇန္ဒားကိုစဉ်းစားပါ (ကောင်စီများ၌အသက်အရွယ်နှင့်စွမ်းရည်အားလုံးအတွက်ဒေသဆိုင်ရာအတန်းများစာရင်းရှိသည်။ )